Alshabaab ku hoobtay inta u dhaxeeya Degmada Baraawev iyo Tuulada Maryan Gubaay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 18 June 2016
Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa jidka u galay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya kuwaasi oo marayay inta u dhaxeeya degmada Baraawev iyo Tuulada Maryan Gubaay.
Sargaal ka tirsan saraakiisha dowladda oo oo la hadlay wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya ee SONNA ayaa sheegay in kagasaaro badan ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa doonaysay in weerarkaan ay dhibaato ku gaarsiiso ciidanka qaranka laakiin taas badalkeeda waxaa halkaas lau dilay Todobo ka tirsan maleeshiyada weerarka soo qaaday iyadoo sidoo kale gacanta lagu dhigay Shan dagaalyahan sida ay sheegeen saraakiisha dowladda.
Ciidamadaan ayaa xiliga uu weerarkaan dhacayay waxay ku siijeedeen magaalada Baraawe ayaga oo weerarkaasi ka dibna si nabad ah kuwii watay socdaalkooda.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa caado ka dhigtay inay gaystaan weeraro kuwaas oo ay ku dhibaataynayaan Bulshada Soomaaliyeed, iyadoo dhanka kalana ciidanka amaanka ay sameeyeen diyaar garow ku aadan ka hortaga jkooxdaan.